1. Dɛn nti na wɔn a wɔsom Onyankopɔn no nyinaa ani gye Yesu mmɛ ahorow no ho?
BERE a Yesu ne n’asuafo wɔ hɔ no, obuu mmɛ anaasɛ ɔyɛɛ mfatoho ahorow pii. Eyinom kyerɛ nea ɛwɔ ɔsoro Ahenni no muni a obi bɛyɛ no mu. Ɛkyerɛ ɔkwan a ɛsɛ sɛ Ahenni no difo “kuw ketewa” no, ne wɔn nso a wobenya daa nkwa wɔ asase so wɔ saa Ahenni no ase no fa so. “Nguan foforo” yi nso ani gye sɛ wobehu nkɔmhyɛ ahorow a ɛfa Ahenni no ho no, na wɔde anibere bɔ mpae denneennen sɛ ‘ɛmmra.’—Luka 12:32; Yohane 10:16; 1 Tesalonikafo 5:16-20.
2, 3. (a) Dɛn nti na Yesu de mfatoho ahorow dii dwuma? (b) Dɛn nti na afoforo a wɔnyɛ n’asuafo no ante ase? (d) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde nsiyɛ sua Onyankopɔn Asɛm na yɛanyɛ sɛ wɔn a wɔka wɔn ho asɛm wɔ Mateo 13:13-15 no?
2 Yesu buu mmɛ yi mu biako kyerɛɛ nkurɔfo no akyi no, asuafo no baa ne nkyɛn bebisae sɛ: “Adɛn na wokasa kyerɛ wɔn mmebu mu?” Yesu buae sɛ:
“Mo de, wɔde ama mo sɛ munhu ɔsoro ahenni mu ahintasɛm no, na wɔn de, wɔmfa mmaa wɔn.” (Mateo 13:10, 11)
Na dɛn nti na wɔamfa amma wɔn? Efisɛ na wɔmpɛ sɛ wɔbɔre kɔ mu konya ne nsɛm no mu ntease a emu dɔ kyɛn so, sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn koma aka wɔn ma wɔayɛ ade ama “asɛmpa” no. Wɔammu Ahenni no sɛ “ademude” anaasɛ “ahene . . . a ne bo yɛ den.”—Mateo 13:44-46.
3 Yesu faa Yesaia nkɔmhyɛ no mu asɛm kae sɛ na ɛreba mu wɔ saa nkurɔfo a wonni gyidi no ho, sɛ: “Ɔte de, mobɛte, na morente ase; na ohu nso mubehu, na morenhu mu. Efisɛ ɔman yi koma apirim, na wɔn aso ayɛ den, na wɔamuamua wɔn ani na wɔamfa wɔn ani anhu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔamfa wɔn koma ante ase, na wɔannan wɔn ho, na mansa wɔn yare.” (Mateo 13:13-15) Ɛsɛ sɛ ɛyɛ yɛn pɛ sɛ yɛbɛkwati sɛ yɛbɛyɛ sɛ saa nkurɔfo a wɔnkyerɛ anisɔ no. Ɛnde, momma yɛmmata Onyankopɔn Asɛm no sua ho.
4. (a) Koma horow bɛn na antumi annya asɛm no mu mfaso? (b) Sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛte asɛm no ase a, wobehyira yɛn dɛn?
4 Wɔ Yesu bɛ a ofii ase wɔ Mateo ti 13:3-8 no mu no, ɔkaa n’ankasa ho asɛm sɛ “ogufo” a ogu aba. Ogu “ahenni no ho asɛm” wɔ koma ahorow ahorow mu. Nnipa bi koma te sɛ kwankyɛn asase. Ansa na aba no begye ntini no, Ɔbonsam soma ne nkurɔfo a wɔte sɛ “nnomaa” ma wobehwim “asɛm no fi wɔn komam, na wɔannye anni na wɔannye wɔn nkwa.” Koma afoforo nso te sɛ ɔbotan so asase. Mfiase no, wɔde anigye gye asɛm no, nanso afei afifide a enyinii no kisaw wɔ sɔhwɛ anaa ɔtaa mu. Aba no bi kogu “nsɔe” mu, baabi a “asetra yi mu dadwen ne haw ne ahonya ne anigyede” mia no. Ah, nanso “aba” a wogui asase pa mu no nso wɔ hɔ!
“Ɔne nea ɔte asɛm no, na ɔte ase; ɔno na ɔsow mu aba, obi sow ɔha, obi aduosia, obi aduasa.” (Mateo 13:18-23; Marko 4:3-9, 14-20; Luka 8:4-8, 11-15)
Yiw, sɛ yegye asɛm no gu koma pa a ɛkyerɛ anisɔ mu na yɛde yɛn ho ma Onyankopɔn Ahenni no ho dwumadi a, obehyira yɛn na yɛn som kronn a yɛde ma Onyankopɔn no bɛyɛ nea ɛsow aba ankasa!
5. (a) Mfatoho foforo bɛn na afei wɔhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnhwɛ no yiye? (b) Dɛn nti na “onipa” yi rentumi nyɛ Awurade Yesu?
5 Wɔ Nsɛmpa no mu no, Marko kyerɛwtohɔ no nkutoo na bere a ɛde “ogufo” ho bɛ no ama akyi no, ɛde mfatoho bi a ɛfa “ogufo” foforo ho toa so. Bere tiaa bi ansa na Yesu de mfatoho yi rema no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no kokoam sɛ: “Monhwɛ yiye nea mote no ho!” Ɛno na afei ɔde ɛbɛ no toaa so sɛ:
“Sɛnea Onyankopɔn ahenni te ni: Ɛte sɛ onipa bi gu aba wɔ fam, na ɔda na onyan anadwo ne awia, na aba no fifi, na enyin, na onnim sɛnea ɛyɛe.” (Marko 4:24-27)
Ɛda adi pefee sɛ “onipa” yi nyɛ Awurade Yesu Kristo a wɔahyɛ no anuonyam no, efisɛ na enhia no asase so anadwo nna bio. Na ɛrenteɛ nso sɛ wɔbɛka sɛ Onyankopɔn Ba a ɔne n’Agya yɛɛ adwuma bɔɔ nneɛma nyinaa no ‘nnim’ sɛnea nneɛma nyin. (Kolosefo 1:16) Enti yetumi hu fi nsɛm afoforo a ɛka ho no mu sɛ “onipa” no fa Kristoni ankorankoro a ɛsɛ sɛ ‘ɔde n’adwene si’ nsɛm a ɛfa “Onyankopɔn ahenni” ho so no ho.
6. Nneɛma abien bɛn na ɛsɛ sɛ “ogufo” biara hwɛ no yiye, na dɛn ntia?
6 Ɛsɛ sɛ “ogufo” biara hwɛ su ko a ɔde gu aba, ne tebea ko a ogu aba no wom no nso. Bere a yɛbɔ mmɔden sɛ yebenya Kristofo su horow no, “asase” anaa nnipa a yɛne wɔn bɔ no betumi anya yɛn nipasu so nkɛntɛnso pa anaa nkɛntɛnso bɔne a yɛn adwene mma so—sɛ́ ɛyɛ asafo no mu anaa akyi no. (Fa toto 1 Korintofo 15:33 ho.) Awiei no, “awi a anyin” no bepue bɛtem no mu, na yɛakotwa. (Marko 4:28, 29) Ehia yiye sɛ “kuw ketewa” no mufo, ne wɔn a wɔhwehwɛ daa nkwa wɔ Onyankopɔn Ahenni nhyehyɛe no mu nyinaa nso, hwɛ yiye wɔ nea wogu ne baabi a wogu ho bere a wɔpɛ sɛ wonya Kristo su no bi no!—Efesofo 4:17-24; Galatifo 6:7-9.
ATORO AHENNI BI
7. Mmɛ ahorow no boa yɛn ma yebu Ahenni no dɛn?
7 Marko asɛm no ka Yesu ho asɛm sɛ ɔkɔ so ka sɛ:
“Dɛn ho na yɛde Onyankopɔn ahenni bɛto? Anaasɛ ɛbɛ bɛn na yebebu wɔ ho?” (Marko 4:30)
Afei ɔto nsa frɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ Ahenni no wɔ ɔkwan foforo so. Ampa, mfatoho ahorow yi boa yɛn ma yehu Ahenni no wɔ akwan horow so, sɛnea ebia yɛbɛhwehwɛ ɔdan bi mu ne akyi ahwɛ sɛnea ɛte, na yɛafi mmeae horow nso ayɛ saa no.
8. (a) Dɛn nti na entumi nyɛ Ahenni adedifo no ho asɛm na onyin a ɛyɛ nwonwa a ɛfa sinapi aba no ho no ka? (b) Dɛn nti na eyi fata Kristoman “ahenni” ma ɛfata? (d) Ɔkwan bɛn so na sɛnea Onyankopɔn kaa Israel a awae ho asɛm no foa ntease yi so?
8 Enti dɛn ho na ɛsɛ sɛ yɛde Onyankopɔn Ahenni no to? Yesu bua sɛ:
“Ɛte sɛ sinapi fua a wodua no fam a ɛyɛ aba horow a ɛwɔ asase so nyinaa mu ketewaa; na wodua a, enyin na ɛyɛ kɛse sen fan nyinaa, na eyiyi abaa akɛse, na wim nnomaa tumi tra ne nwini ase.” (Marko 4:30-32)
Eyi yɛ onyin a ɛyɛ nwonwa—ampa, ma biribi a ɛtrɛw koraa sen Ahenni adedifo 144,000 no “kuw ketewa” a ‘Agya no apene so sɛ ɔde Ahenni no bɛma wɔn’ no! (Luka 12:32; Adiyisɛm 14:1, 3) Mmom no, ɛyɛ Kristoman a awae afi asafo a na Yesu de asi hɔ ho no atoro “dua” kɛse no nyin ho asɛm. (Luka 13:18, 19) Ɛso! Ɛhoahoa ne ho sɛ ɛwɔ asafo mma a wɔn dodow boro 900,000,000 wɔ wiase nyinaa, a ɛkyerɛ sɛ wobenya wɔn trabea wɔ ɔsoro. Israel a ɛwaee no yɛɛ ahenni a awae yi mfonini dedaadaw, nea Yehowa kae wɔ ne ho sɛ: “Na mede, metew wo bobe pa ma wufi nea eye nko ara mu, na ɛyɛɛ dɛn na woadan me amanɔnne bobe nhama yi?”—Yeremia 2:21-23; hwɛ Hosea 10:1-4 nso.
9. (a) Henanom ne “nnomaa” ne “dua” no nnubaa? (b) Esiane nsɛm a ɛwɔ 2 Tesalonikafo 1 ne Mateo 7 no nti, dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛtew yɛn ho fi “dua” no ho koraa gyina nkyɛn mprempren?
9 Sɛnea Mateo kaa “dua” yi ho asɛm no, “wim nnomaa ba bɛtra n’abaa so.” Ɛda adi pefee sɛ, wɔn ara ne “nnomaa” a wɔwɔ ɛbɛ a odii kan bui no mu a wɔbɛsosɔw “ahenni no ho asɛm” a eguu kwankyɛn no. (Mateo 13:4, 19, 31, 32) Saa “nnomaa” no tratra “dua” no nyamesom kuw ɔhaha no abaa no so. Wogyina hɔ ma “onipa a onni mmara” a wawae afi gyidi ho, a ɛne Kristoman asɔfo no. Wɔbɛhwere nwini a wɔkɔtratra ase bere a Onyankopɔn twa saa “dua” no ne atoro som afoforo nyinaa to fam no. Twe wo ho fi hɔ, mprempren ara! Efisɛ saa “dua” no asehwe abɛn pɛɛ!—Fa toto 2 Tesalonikafo 1:6-9; 2:3; Mateo 7:19-23 ho.
10, 11. (a) Nsɛm tebea bɛn mu na Mateo ne Luka de “sinapi aba” ho bɛ no mae, na dɛn nti na saa a wɔyɛɛ no fata? (b) Afotu ne kɔkɔbɔ bɛn na Ahenni ho mmɔkaw bɛ no de ma yɛn?
10 Sɛnea ɛfata no, Luka ka “sinapi aba” ho bɛ no ho asɛm de toa kasa a Yesu kasa tiaa ne bere so anyamesomfo a wɔawae afi gyidi ho no so. Nea ɛte sɛ nea wɔde si asɛm no so dua no, Mateo ne Luka nyinaa kyerɛe bio sɛ na Yesu rebu “mmɔkaw” ho bɛ. (Mateo 13:32, 33; Luka 13:10-21) Sɛ wɔde mmɔkaw di dwuma sɛnkyerɛnne kwan so wɔ Bible mu a, bere nyinaa ɛtwe adwene si nneyɛe a ɛnteɛ so, te sɛ bere a Yesu bɔɔ n’asuafo kɔkɔ sɛ “monhwɛ mo ho yiye Farisifo ne Sadukifo mmɔkaw ho,” ne bere a ɔsomafo Paulo tuu Kristofo fo sɛ wonyi “bɔneyɛ ne amumɔyɛ mmɔkaw” mfi hɔ no.—Mateo 16:6, 11, 12; 1 Korintofo 5:6-8; Galatifo 5:7-9.
11 Wɔ mfatoho no mu no, wɔka “ɔsoro ahenni no” ho asɛm bi sɛ ɛte sɛ mmɔkaw a ɔbea bi de kɔfɔtɔw asikresiam susukora abiɛsa mu. Enti asikresiam a wɔafɔtɔw no nyinaa kaw. Eyi kyerɛ ɔkwan a wɔde Babilon atoro nkyerɛkyerɛ ne nneyɛe sɛe wɔn a wose wɔyɛ Kristofo asafo no nkakrankakra, a nea efi mu ba ne Kristoman atoro ahenni ahyehyɛde kɛse no a wɔde si hɔ no. Ɛsɛ sɛ eyi yɛ kɔkɔbɔ ma yɛn. Sɛ yɛhwɛ Kristoman a awae no awiei a ɛyɛ mmɔbɔ no a, ɛsɛ sɛ Ahenni adedifo “kuw ketewa” no ne wɔn ahokafo a wɔwɔ hɔ nnɛ no hwɛ yiye na wɔamma kwan amma atoro “mmɔkaw,” nnaadaa nkyerɛkyerɛ no, ansɛe wɔn komam anisɔ a wɔwɔ ma kronkron ne nokware a “ahenni no ho asɛm” yɛ no da.
OGUFO NE NE “TAMFO” NO
12, 13. (a) Wɔ “awi” ne “wura bɔne” ho bɛ no mu no, ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛkyerɛ atitiriw a wɔwom no mu? (b) Dɛn ne twabere no, na adanse bɛn na yehu a ɛkyerɛ sɛ ɛrekɔ so nnɛ?
12 Wɔ mfatoho foforo mu no, Yesu de “ɔsoro ahenni” no to “onipa bi a oguu aba pa n’afuw mu” ho. Afei, “nnipa dae no, ne tamfo bae beguu wura bɔne bi awi no mu, na ofii hɔ kɔe.” Aba bɛn na wobetumi ahwɛ kwan afi saa afuw no mu? Yesu kɔɔ so kyerɛe sɛ ogufo yi ne n’ankasa, “onipa ba no,” nea n’Ahenni aba a ogui no sow Kristofo a wɔte sɛ awi, “ahenni no mma” no. Ɔtamfo no ne “Ɔbonsam,” na “wura bɔne” no ne “ɔbɔne no mma”—ne nyaatwom nyamesom “asefo” no. (Fa toto Genesis 3:15 ho.) Wɔ ne mmamu mu no, nokware Kristofo bi kɔɔ so nyinii wɔ “wura bɔne” a adi afra wɔ ɔwae kɛse a efii ase fii afeha a edi kan mu no mu. Na afei wɔ yɛn afeha a ɛto so 20 yi mu no, yɛabedu twabere mu—“nneɛma nhyehyɛe no awiei, na atwafo no ne abɔfo”!—Mateo 13:24-30, 36-39, NW.
13 Awiei no, wɔ abɔfo akwankyerɛ ase no, wɔtew “awi” no fi “wura bɔne” no ho. Wɔama nsonsonoe kɛse a ɛda abien no ntam no ada adi. Sɛnea yebehu no, adanse no abu so sɛ “onipa Ba” no wɔ ne soro Ahenni no mu nnɛ, na ɔreboaboa nokware Kristofo a wɔte sɛ awi no ano aba Ahenni dwumadi mu. Na Kristoman ne n’akyerɛkyerɛfo a wɔkyerɛkyerɛ ɔwae no nso ɛ? Yesu bɛ no kɔ so ka sɛ:
“Onipa ba no bɛsoma n’abɔfo ma wɔakɔboaboa hintidua ne wɔn a wodi nsɛmmɔne nyinaa ano afi n’ahenni mu.”
Mfehaha pii na Kristoman asɔfo de wɔn atoro nkyerɛkyerɛ ne nnipa anim treneeyɛ ato komapafo hintidua. Nanso wɔaba Onyankopɔn atemmu mu, na ‘wosu twɛre wɔn se.’ Ɛnnɛ, wodi mmoa a wɔn asafo mma de boa wɔn no so a ɛrehuan ne mpaapaemu a ɛwɔ wɔn ankasa mu no ho awerɛhow. Nea ɛne eyi bɔ abira no, Yehowa asomfo a wɔte sɛ awi no redi n’Ahenni no ho adanse anigye so. Wɔhyerɛn “sɛ owia wɔn agya ahenni mu.”—Mateo 13:40-43; fa toto Yesaia 65:13, 14 ho.
‘MPATAAYI’ ADWUMA BI A ENYA NKƆSO
14, 15. (a) Yesu fii ‘mpataayi’ adwuma kɛse no ase dɛn, na ‘mpataayi’ ahorow bɛn na akɔ so fi saa bere no, na nam bɛn na ‘abuma’? (b) Ɛnde dwuma bɛn na abɔfo no di wom, na ɔkwan bɛn so na wɔfa to ‘mpataa’ no gu? (d) Hokwan bɛn na yɛanya a ɛsɛ sɛ yɛda ho ase?
14 Yesu ka sɛ: “Ebio, ɔsoro ahenni te sɛ asawu a wɔde guu po mu na ebumaa nam horow nyinaa bi.” (Mateo 13:47) Yesu ankasa na ofii ‘mpataayi’ adwuma yi ase, bere a ɔfrɛɛ n’asuafo a wodi kan no fii wɔn asawu ho sɛnea ɛbɛyɛ na wayɛ wɔn “nnipa yifo” no. (Mateo 4:19) Nanso wɔ gyidi ho ɔwae kɛse no mu, wɔ abɔfo akwankyerɛ ase no, anokwafo akuw nketewa ne Kristoman asɔre ahorow akɔ so agu wɔn a wɔbɛsakra wɔn no ho ‘asawu.’ Nanso, sɛnkyerɛnne kwan so po mu abɔde ɔpepehaha pii no nyinaa na wɔada wɔn ho adi sɛ wɔyɛ ‘mpataa a eye’ anaa? Sɛnea yɛahu no, Kristoman nyamesom ahorow no de wɔn nkyerɛkyerɛ sii Plato Hela nyansapɛ ne tete Babilon “anansesɛm ahorow” so. Wohu aba a wɔasow no wɔ nitan, apereperedi ne mogyahwiegu a akeka Kristoman ho abakɔsɛm nkratafa mu pɔtɔɔ, ne boa a wɔaboa wiase akodi wɔ yɛn afeha 20 yi mu no mu.
15 Nea edi akyiri no, wɔ “nneɛma nhyehyɛe no awiei” yi mu no, bere adu sɛ abɔfo no bɛma “asawu” no so. Eyi yɛ wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Yesu Kristo akyidifo ahyehyɛde ahorow a ɛwɔ asase so—nokware de ne atoro de—no ho sɛnkyerɛnne. “Nam” a wohui sɛ “enye” mma “ɔsoro ahenni no” de, ɛsɛ sɛ wɔtow gu, na wɔde gu ɔsɛe “ogya fononoo mu; ɛhɔ na osu ne setwɛre wɔ.” (Mateo 13:48-50) Nanso abɔfo no reboaboa ‘mpataa a eye’ ano afi sɛnkyerɛnne kwan so asawu no mu. Hwɛ sɛnea ɛsɛ sɛ yɛda ase kɛse sɛ yɛanya hokwan ma wɔakan yɛn afra eyinom mu—nnipa a wɔda nsow a wɔahyira wɔn ho so ama sɛ wɔbɛma Yehowa din so na wɔbɔ n’Ahenni no ‘ba’ ho mpae ntease pa mu!
16. Ɛbɛ a edi akyiri yi de nsemmisa bɛn na ɛba, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛn ani gye ho sɛ yebehu mmuae horow no?
16 Nanso dɛn ne “nneɛma nhyehyɛe no awiei” a Yesu ka ho asɛm denneennen saa wɔ ɛbɛ a edi akyiri yi mu no? Dɛn ne “nna a edi akyiri” a Yesu asuafo no pii kyerɛw ho asɛm no? Seesei yɛte saa nna no mu anaa? Sɛ saa a, dɛn na eyi kyerɛ ma yɛn, ne adesamma nyinaa nso?
[Kratafa 104 adaka]
TIE YESU AHENNI HO MFATOHO AHOROW NO!
● Eyinom ka Ahenni no ho asɛm sɛ ɛyɛ fɛ, te sɛ “ademude” anaasɛ “nhene pa.” Wɔde wɔn a wɔhwehwɛ no toto “asase pa,” “awi,” ‘mpataa a eye’ ho.
● Wɔyɛ atoro ahenni no ho mfonini sɛ sinapi “dua” a ɛwɔ nnubaa pii, asikresiam a akaw. N’aboafo no ne “nnomaa,” “wura bɔne,” ‘mpataa a enye,’ no.
● Sɛ yɛhwɛ Ahenni no nkɔso fi mmeae ahorow a, yetumi te ɔsɛmpɔw kɛse a esi adesamma anim nnɛ no ase yiye, na ɛhyɛ yɛn nkuran ma yegyina Ahenni no afã pintinn di nokware.
Share Share Ahenni Ho Mfatoho Ahorow
kc ti 11 kr. 96-104